Minisiteran'ny aterineto - blaogera
Ny Fiangonana Testamenta Vaovao
Isan-tany isika ary tsy manana foibe foibe na filoha. Ny lohan'ny fiangonana dia hafa noho i Jesoa Kristy (Efesiana 1: 22-23).
Ny fiangonan'ny fiangonan'i Kristy dia mahaleo tena, ary ny Tenin'Andriamanitra izay mampiray antsika ao amin'ny Finoana iray (Efesiana 4: 3-6). Manaraka ny fampianaran'i Jesoa Kristy sy ireo Apôstôliny isika, fa tsy ny fampianaran'ny olona. Kristianina fotsiny isika!
Miresaka ny toerana misy ny Baiboly isika, ary mangina ny mangina ny Baiboly.
Vaovao Tsara: Fampandrosoana vaovao ho an'ny aterineto
Nahavita ny fanavaozana rehetra tao amin'ny tambajotra izahay ary vao haingana no nanombohana ny tranokalanay vaovao. Ity rafitra vaovao an-tserasera ity dia natao hanasoavana ny fiangonan'i Kristy sy ireo izay mikatsaka ny fomba tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Ny fotodrafitrasa vaovao dia ahitana karazana vaovao sy fampivoarana vaovao izay hanompo kokoa ny fiangonan'i Kristy eran-tany.
Ny tontalin'ny World Worldwide ho an'ny fiangonana an'i Kristy dia navaozina ary hampiditra app andro maimaim-poana ho an'ny Android Smart Phones sy Iphones manerantany.
Faly izahay momba ny hoavy ho an'ny fiangonan'i Kristy an-tserasera. Misaotra anareo rehetra izay ataonareo ao amin'ny tanimboaloboky ny Tompo. Tena ankasitrahana ny fitiavanao sy ny fanohananao ny fanompoana.
Mahatsiaro anay amin'ny vavaka ataonareo rehefa miasa mba hanompo tsara kokoa ny fiangonan'i Kristy maneran-tany. Tsara Andriamanitra!